Ngathi-iWuxi Cayce ngoMeyi iTeknoloji yokuThengisa iNkampani, Ltd.
I-Wuxi Cayce ngoMeyi iTeknoloji yokuThengisa i-Co., Ltd ikwindawo echumileyo yeYangtze River Delta kwiziko lejiyometri., Ngasemlanjeni iYangtze, eTaihu ejolise. EMpuma ukuya kwiziko lezoqoqosho lase-China-i-Shanghai i-150 yeekhilomitha, entshona kwikomkhulu lakudala-i-Nanjing i-150 yeekhilomitha, emazantsi ukuya kwi-Wuxi Sunan International Airport ngama-50 eekhilomitha. I-Jinghu kunye ne-yanjiang oohola bendlela ababini abakhulu badibana kumhlaba we-jiangyin, ibhulorho yendlela i-Jiangyin Yangtze River inxibelelana nomantla kunye nomazantsi omlambo i-Yangtze, yindawo ebalulekileyo yezothutho kuMlambo i-Yangtze ezantsi. I-Wuxi Cayce ngoMeyi iTeknoloji yokuThengisa iNkampani, i-Ltd imi kwimida esempuma yepaki yoshishino.
I-Wuxi Cayce May Technology Technology Co, Ltd ishishini elidibeneyo lokugcina impahla elijolise kwiNzululwazi, kwiShishini nakuRhwebo. Inabasebenzi abangaphezu kwama-300, kubandakanya nabangaphezulu kwama-88 beekholeji nabasebenzi abaqeqeshiweyo. Ngoku lilungu lamandla elanga e-China. Inkampani yethu iphumelele i-ISO9001: isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lweMigangatho ka-2008, isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lweNdalo ye-ISO14001, isiQinisekiso seNkqubo yoLawulo lwezeMpilo noKhuseleko. Iimveliso zibandakanya i-petroleum, i-petrifaction, ukutya, ukuhambisa ngenqanawa, umzila kaloliwe kunye nomgca we-elektroni, njl. Inkampani yethu inentengiso, ukuthengisa, isebe leprojekthi, isebe lobuchwephesha, i-QC, igumbi lobugcisa, isebe lemveliso, iilebhu, isebe lenkonzo, njl. Njl., Ezibonelela ngenkqubo yokuqinisekisa eyomeleleyo kwimveliso, umgangatho wentengiso nasemva kwentengiso yeemveliso.
Kule minyaka idlulileyo, inkampani ityale imali kakhulu kwiintsapho ezomeleleyo, eziyilwe zaze zenziwa ngaphezu kweshumi iibhanti zokuhambisa umthwalo, ilaphu leerabha kunye nelayini yerabha yokuvelisa. Ngoku sinezibhengezo ezi-3, umatshini wokuxuba o-12, i-calender enye eyi-1830, i-calender enye eyi-1730, i-calender eyi-1400 yomatshini wokuphilisa, i-1800 yomatshini wokuphilisa umgqomo, i-2000 yomatshini wokuphilisa igubu, enye i-2200 Umatshini ophilisayo wegubu, umatshini ophilisayo wegubu elingu-3000, umatshini wokuphilisa umgqomo ongama-4200, umatshini wokuphilisa umgqomo wama-4200 ngowona mkhulu ehlabathini. Ngaphezu koko, kufuneka 8 umatshini iiseti cinezela, oko kukuthi 2400 * 10000, 4000 * 2000, 1500 * 3000, 1400 * 5700, 1400 * 4000, 1200 * 2700, 650 * 4000.Ku-2016, senza umatshini super-ngokubanzi, ububanzi ziimitha ezingama-24.
I-Caycemay igxile ekuziseni iimpahla ezinzima kunye nakwimpahla ethambileyo. Uninzi lwabasebenzi abanobuchule nabanobuchule bayazibandakanya kwaye bafundisiwe ukuqinisekisa ukusebenza kwenkqubo esemgangathweni, ulawulo lwemveliso kunye nokukhulisa amandla emveliso. Okwangoku, ukulungiselela ukuqokelela ulwazi lwentengiso lwamva nje kunye nomyalezo wobuchwephesha obukhulisa ukukhula ngempumelelo kunye neemveliso ezintsha, iCaycemay iseke ubudlelwane obusisigxina kunye nobuzinzileyo bokusebenzisana namanye amaziko ophando. Okwangoku, inkampani inamalungelo awodwa omenzi wechiza alishumi elinambini, uyilo lweshiti yerabha eyomileyo, imigangatho yeshishini le-silicone elikhuselweyo bubushushu, elithatha inxaxheba kuhlaziyo lwemigangatho yelizwe yerabha.
Umgangatho bubomi benkampani, inkampani ibambelela kubaluleke kakhulu kulawulo lomgangatho wemveliso, sinabasebenzi abaziingcali abagxila kulawulo lomgangatho, sineelebhu zeemveliso zobungcali, igumbi lokuvavanya, iilabhu. Kwimveliso, sinamathela kwimveliso esemgangathweni, ukunyanzeliswa okungqongqo kwemigangatho yesizwe, imigangatho yezemigangatho kunye nemigangatho yamashishini, ukuze iimveliso zikwanelise iimfuno zabathengi.
Iimveliso zenkampani yaseCaycemay zinxulumene nemveliso yesizwe kwimizi mveliso eyahlukeneyo kwilizwe liphela, ezinye iimveliso zithunyelwa kumazwe amaninzi. Isikali semveliso, umgangatho, ixabiso, ukuhanjiswa kunye nomthengi Inkonzo inendumiso yomthengi kwaye ibonwabele igama eliphezulu.
Iimveliso zeCaycemay zijolise kumgangatho ophezulu, wokugaya kunye nokufunxa itekhnoloji yamanye amazwe, luxanduva kukuthatha indawo yokungenisa ngaphakathi, ukwandisa izinga lasekhaya. Izambatho zokucima umlilo kwisithuthi sikaloliwe zinikezelwa kwiinkampani zangaphandle; Iphepha le-silicone yerabha yelaminator yelanga, iglasi, ukusebenza ngomthi kunye nokwenza amakhadi kunandipha igama elihle; Irabha yomgangatho ikhula kakuhle kakhulu.
Ngombono wokuba umgangatho ophezulu, eyona nkonzo intle, amaxabiso okhuphiswano aya kuzinza kwaye andise inkampani, uCaycemay uyaqhubeka nokwakha inkcubeko kunye nengqondo “esekwe emntwini.” Eli nyathelo likhuthaza kakhulu abasebenzi ukuba baphucule uxanduva kunye namandla okuphucula aqinisa amandla kunye nokubumbana kweshishini.
Ngomqondo "wokunyaniseka kunye nokuthembela kutsala abathengi kwihlabathi liphela", iCaycemay ngenzondelelo iyakwamkela ukuba undwendwele umzi-mveliso ngethemba lokufumana ukuthembela kwakho, inkxaso kunye nokuncoma ngenxa yeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo yeCaycemay.
I-Caycemay iseke inkqubo yoqinisekiso lomgangatho ukusuka kwizixhobo ezingena kwifektri ukuya kwinkonzo yemveliso emva kokuthengisa kunye nombutho wophuhliso lwemveliso entsha ngobunjineli kunye nabasebenzi bobuchwephetsha njengombutho ophambili. Ngesiseko sokuzinzisa imveliso esele ikhona kunye nokuphucula ngakumbi umgangatho wemveliso. Ukwandisa ubunzulu beenguqulelo zetekhnoloji kunye nezinto ezintsha zethekhnoloji, kwaye ngentsebenziswano kunye neeyunithi zophando lwenzululwazi kunye neeyunivesithi. Qesha iingcali ezivela phesheya. Sombulula iingxaki zobugcisa kwinkqubo yemveliso kwaye uphuhlise iimveliso ezintsha. Inkampani yaseCaycemay izimisele ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezinokuthenjwa nezicwangcisiweyo, iphendule kwaye isuse ukuhanjiswa (ukuhambisa) iimpazamo zokusebenza kwebhanti kwaye ukhethe imveliso efanelekileyo yokuhambisa (yokuhambisa) yebhanti ukuhlangabezana nokusebenza komsebenzisi kunye neemfuno zesicelo. Isixhobo sokulungisa esezantsi siyilelwe kwaye siphuhliswa yinkampani sinokuqinisekisa ukudibanisa okukhawulezayo kunye nokusebenza kwebhanti kunye nokubopha kwindawo yebhanti ngumsebenzisi. Ukunciphisa ixesha lokuphumla. ukunciphisa iindleko zokuvelisa. Umsebenzisi unokuchaza ubungakanani kunye nokubalulwa kwebhanti, ibhanti engapheliyo okanye ibhanti evulekileyo, okanye imitya yokuphakamisa iglu, izikhokelo zesikhokelo okanye izikethi ebhantini. Siqhelene nemfuno yakho yeebhanti, kwaye sikholelwa ukuba inkonzo yethu iza kukunceda.